Ukuqhathaniswa phakathi kwe-Geomedia ne-GvSIG - i-Geofumadas
Ukuqhathanisa phakathi kwe-Geomedia ne-GvSIG
Septhemba, 2008 Geospatial - GIS, I-GvSIG
Okwamanje isifingqo somsebenzi enikeziweku II yomthombo ovulekile GIS ngu Juan Ramon Diaz futhi Jordi Rovira Mesa Jofre ephepheni "Ukuqhathaniswa GIS esekelwe yomthombo ovulekile kanye GIS commercial" kuyinto ukuqhathanisa phakathi GvSIG futhi Geomedia amathuluzi; nakuba awusebenzi ukwethula izindlela ukuthi uqinise GvSIG njengoba SEXTANTE nokuthuthukiswa zamuva; Ngicabanga ukuthi umsebenzi we-brainy kakhulu.
Ngeshwa kuyadingeka ngalokhu ukuthi okuthunyelwe kubanzi futhi kulahlekelwe ifomethi okwesikhashana, nakuba kuye kwafingqiwe. Ungalanda isethulo esiphelele kusuka lapha.
Nakuba kufanele ngivume ukuthi kulezi zingeniso ngilapho ngikhumbula i-Dreamweaver ngokulawula okuqondile kwamatafula iZiPress engavumeli
Ukusebenza Iziphumo Iziphetho
Ukusebenza okuyisisekelo Ukuhlelwa kwephrojekthi: I-GIS emibili iyafana namathuba, i-Geomedia Pro inikeza ithuba lokushintshanisa umbono wemephu. Ukuphathwa kweLogenda: gvSIG Akukhona GeoMedia Pro ngokungamukeli zokuhlanganisa nomqondo uxhumano, evumela esasihlukanisa izingqimba evulekile GIS uxhumo izinhlangano ezahlukene ezikhona. Ukuhlelwa kwesakhiwo: Sigcizelela umugqa womyalo wokudweba we-gvSIG, isitayela se-CAD, nenani elikhulu lezizingeli ezikhona ku-Geomedia Pro. Indalo yezingqikithi: i-gvSIG ne-Geomedia zifaniswa ngalesi sici, i-GIS emibili ivumela ukudala ngokukhululeka kwezingqikithi ngenani elilodwa noma ngesigaba. Sinikeze isisindo ilingane izigaba ezine (25% kwesigaba ngasinye). Umphumela ukuphela: Geomedia Pro kancane ngaphezu gvSIG ngokuthi functionalities eziyisisekelo. Isigaba eqokomisa gvSIG okungenani, elawula le nganekwane, imbangela rigidity layo ukubufihla isisindo ngamunye ngokuvumela izinhlangano noma ufake uxhumano ekhona kwi-GIS, ukungabi kokubalwe orientation uxhumano.
Ukuhlaziywa kwendawo Ukusebenza: Kunezigaba ezine zokuhlaziywa okungenzeka: ukuhlelwa kabusha ngezimfanelo, ukuguqa, izindawo zethonya kanye nemibono yezintandokazi. Kulezi ezine ezine-gvSIG ne-Geomedia Pro, zinomsebenzi omelelwe. Noma kunjalo, ku-gvSIG imisebenzi ayizange isetshenziswe kuze kube ngaphezulu. Indlela: Kusukela ekubukeni komsebenzisi, i-Geomedia Pro kulula ukusebenzisa imisebenzi ehlukene yokuhlaziywa kwendawo. Esikrinini esisodwa umsebenzisi unquma ukuthi yiziphi izinhlangano afuna ukuzisebenzisana nazo, iziphi ubudlelwane ozisebenzisayo futhi ezibonisa ukuhlunga. Ku-gvSIG, zonke iziphumo zokuhlaziya zigcinwe efayeleni le-Shapefile elifakazela ukuthi ukuxhumanisa izihlungi ezintathu ezihlukene, kubalulekile ukudala amafayela amabili aphakathi okungekho ukusetshenziswa. ukuhlaziywa Spatial ingenye izici ezibaluleke kakhulu we GIS ekukhiqizeni ulwazi qualitative, futhi ngaphezu kwakho konke iyona eyenza a CAD GIS. Lesi sici eziyisisekelo siye esikalini amaphuzu amabili, functionalities ezahlukene (isisindo 60% okungezakho) okwesekwa nguMshini ngamunye SIG, futhi indlela (40 isisindo%) noma usebenzise icala kusukela iphuzu Ngenxa umsebenzisi ukusebenzisa ukuhlaziywa ngekwendzawo. Amandla okunciphisa: ukuhlelwa kwemvelo, amafomethi, ukuhlunga nokuphathwa. Iziphetho: Ngamafuphi, i-Geomedia Pro ibonakala ngamakhono okuhlaziya nakwezakhiwo zomsebenzisi. I-GvSIG imkhiqizo encane kakhulu, futhi kusadingeka ukuthi ithuthukise ezinye zezinsiza zayo.
Amandla we-Raster Siye sahlola ngalolu daba imiqondo emithathu ehlukene: i-georeferencing of images (isisindo 35%), ukubukwa kwe-orthophotos (isisindo 35%); futhi, ukuhlunga nokukhwabanisa kwezithombe eziphezulu (isisindo 30%). I-Georeferencing yezithombe: Ithuluzi nje njengoba enembile kuzo zombili GIS, kodwa ngempela ezingaqinisekile kuleli gvSIG, ngokuvamile iphutha ukusebenza uphela, kungani uhlolwa phansi e gvSIG. I-Orthophotos ibonisa: Izinhlobo ezihlukahlukene zama-raster georeferenced lapho i-Geomedia Pro ne-gvSIG ingasebenza khona kuqinisekisiwe. Ukuhlunga nokusingatha: kulesi sigaba, i-gvSIG ibonge kakhulu isandiso somqhubi we-raster. Lokhu kukuvumela ekuhlaziyweni kwedatha yezibalo (i-histograms) ezithombeni, ekusetshenzisweni kwezihlungi ezifana nokugcoba ngephasi eliphansi. Iziphetho: Bobabili GIS kuthiwa ngokulinganayo ifaniswe, lo mehluko ukuzinza olunikezwa thuluzi Geomedia Pro georeferencing izithombe ngenkathi gvSIG ubonisa amakhono baphakame zokuhlunga nokusingatha sibonga raster yayo isandiso.
Ukusebenzisana Kulesi sici, ukuxhumana kwe-GIS neminye imithombo yedatha kuhlolwa, ukusebenzisana kuyisici esihle sokuhlukanisa i-GIS. Sizohlola lesi sici emhlabeni jikelele futhi sihlukanise imithombo yedatha ngezigaba ezine: amafomu we-GIS, amafomethi we-CAD, yolwazi kanye namazinga we-OGC.Amafomu we-SIG
I-ArcInfo, I-ArcView, i-Shapefile, i-Framme, i-Geomedia Smartstore, i-Mapinfo
I-DGN, i-DXF, i-DWG
Ukufinyelela kwe-Microsoft, i-Microsoft SQL Server, i-MySQL, i-Oracle Spatial / Locator, i-PostgreSQL / i-PostGIS
Iziphetho: I-Geomedia Pro, yi-GIS enikeza ukusebenzisana kakhulu ngekhono layo elikhulu lokufunda nokubhala emithonjeni ehlukile yedatha (Microsoft Access, Oracle ...), namakhono okuthumela idatha kumafomethi e-CAD afana ne-DWG. GvSIG siqokomisa ukuzimisela kwabo ukusebenza namazinga OGC, nokuzimisela uma ifakwe njengoba Oracle database ne PostgreSQL / PostGIS.
Ukusebenza Ukuze sihlole ukusebenza, sifuna ukukala ukulayisha ngokweqile (isisindo 30%), ijubane lokuphatha (isisindo 30%) nokwenza ngcono ukulungiswa kwendawo yokuhlola (isisindo 40%). Ku ukulayisha ngokweqile, GvSIG yayishesha kunokusebenzisa Geomedia Pro. I imiphumela Geomedia kuthuthuke ngokuhamba kwesikhathi 50% kulinganiswa kuphela ngokushintsha idatha yohlelo Shapefile ukuze Geomedia SmartStore. Ku isilinganiso sejubane wezokuphatha sithutha ulwazi oluningi oluvela kolunye ungqimba kwesinye. I-GvSIG iphinda isheshe kakhulu kune-Geomedia Pro. isilinganiso sokwenza kahle kokuhlaziywa kwendawo yokuhlaziywa kwendawo, i-Geomedia ihlukane: ithuluzi lokuzinza nokusheshisa. Ku-gvSIG kunamaphutha abangelwa umtapo wakho we-JTS noma ngokuhluleka kwakho ukusebenza ngezepolitiki ezithile. Iziphetho: i-gvSIG iyashesha kune-Geomedia Pro, emele ngokucacile noma ehambayo
Idatha esuka komunye ungqimba ukuya ku-database, inqwaba yolwazi. Ngakolunye uhlangothi, i-Geomedia Pro iphuma ngokuzinzile futhi isheshayo lapho kwenziwa ukuhlaziywa kwendawo, ngakho-ke, iphakeme kakhulu kune-gvSIG.
Ukwenza ngokwezifiso kwe-GIS Sihlola imibuzo emithathu emhlabeni jikelele: ukuthi i-GIS ivumela ukuzenzela, uhlobo lolimi noma izikripthi ezenza kube khona; futhi, imibhalo ekhona. I-SIG vumela ukwenza ngokwezifiso? Kuzo zombili izimo impendulo ilungile: yebo! Izinhlobo zolimi noma izikripthi, i-gvSIG inelimi lokubhala (i-Jython) futhi ungakha futhi izandiso ku-Java usebenzisa amakilasi we-GvSIG. Ku-Geomedia Pro, ithuthukiswe ezilimini ze Visual Basic 6.0 futhi .Nokho, ngezincwadi zamathuluzi azo ukwakha imiyalo ehlanganisiwe, noma izinhlelo zangaphandle kwi-GIS. imibhalo, I-Geomedia Pro inezincwadi eziningi lapho into ngayinye ichazwa futhi icebile kwizibonelo. Ku-gvSIG, amadokhumenti ahlakazekile futhi angajulile. Akunakho incazelo yento ngayinye kanye nesakhiwo seglasi le-GvSIG, kanye nencazelo ephelele yamakilasi adingekayo. Iziphetho: Kulezi zici ezimbili ze-GIS, isisombululo sokwenza ngokwezifiso sinqunyulwe kahle. Kumadokhumenti e-GvSIG, ukuhlolwa akubi. Umqambi wezichwepheshe we-GIS uthola kulula ukwenza ngokwezifiso i-Geomedia Pro kune-gvSIG, ngenxa yezikhala emadokhumenti ku-gvSIG.
Umthamo we-3D Siye sahlola umthamo wokuhlela we-Z ukuxhumanisa (isisindo 40%), ukumelwa kwensimu ku-3D (isisindo 30%); futhi, ukumelelwa kwemiqulu (isisindo 30%). Iziphetho: Ngiphakathi GIS inikeza amathuba sína izigaba esikalini, kuphela mayelana Geomedia okudlula Pro ngezikhundla ezimbili: geocode Z luphinde ukugcina timbiwa kwamanye ezehlukene; kanye kungenzeka, nge umyalo adalwe inkampani ngaphandle Intergraph, extrusions enze titrations futhi ukubonisa ngemapholigoni kusuka ku-Google Earth noma ukusebenza Geomedia Isimo sezwe, umkhiqizo aphelele nge functionalities oyifunayo. Ngo gvSIG lezi zinhlangothi izotholakala ku 3D ezikhishwe inguqulo esizayo gvSIG.
Amamephu Njengoba sesivele sibonakalisiwe ememori yephrojekthi, isizukulwane seMephu yisona sizathu esiphezulu sokusebenzisa i-GIS. Kulesi sici sesihlolisise ukusetshenziswa (isisindo 50%) sethuluzi nokukhanya (isisindo 50%) somphumela. Ukusetshenziswa: Ku-Geomedia Pro, ithuluzi lokumaka lingase libe nenembile, nakuba inqubo yokwakha amamephu kulula. Ku-gvSIG, sithola ithuluzi elilula ukuyisebenzisa futhi ngesikhathi esifanayo enembile kusukela ekuqaleni, ngaphandle uma uhambisa ibha yokulinganisa imephu, ngoba izindawo zokubonisa zilahlekile; Ngakolunye uhlangothi kubhalwa isizukulwane esiqondile sebalazwe ku-PDF. I-Vistosity: Bobabili gvSIG njengoba Geomedia Pro, lokuthi umsebenzisi zonke izinyathelo ezidingekile ukuze adale okhangayo Map amathuluzi: ukuhlela amakhono, ngokwezifiso amathuba izimpawu nemigoqo isikali (ifomethi: SVG e gvSIG futhi WMF e GeoMedia), ukuhlela legend . Iziphetho: I-GIS emibili ilingana nomunye nomunye, ngamathuluzi amabili okudala nokuqamba amamephu amahle kakhulu.
Amadokhumenti nokusekela Amadokhumenti akwanele noma ukusekelwa okunganele kumsebenzisi kungabangela umsebenzisi ukuba alahle noma alahle ukusetshenziswa kwe-GIS. Ukuyihlola, sihlukanise ngezigaba ezimbili: imibhalo nokusekela, ngesisindo esifanayo sokuyihlola emhlabeni wonke. imibhalo: Endabeni Geomedia Pro, lo kuhlolwa omuhle kakhulu, kukhona imibhalo yazo zonke izinhlobo kanye izibonelo ezidingekayo efakwe nge Geomedia Pro Ngo gvSIG yokuthi kokuba ukulanda yonke imibhalo ngaphandle ubuncane imibhalo efakwe kanye. nethuluzi kanye superficiality imibhalo ukuthuthukiswa uphoqa kithi hhayi ukuba sinake kakhulu kucacisa leliphuzu. Ukusekelwa: Okuhlangenwe nakho kulolu hlelo lokugcina lomsebenzi nge-gvSIG yilokho, kungakapheli amahora amathathu, emva kokuphakamisa umbuzo ohlwini lwabasebenzisi, impendulo ephumelelayo iyatholakala. Kubonisa ukubheja okwenziwe yi-gvSIG kunhlu lomsebenzisi. Ukuvimbela kunoma yisiphi isikhathi umsebenzisi unomuzwa wokuba wedwa phambi kwesigameko. Kubonisa ngendlela enhle, isipiliyoni seminyaka eminingi ye-Intergraph, esiya kwezidingo zabasebenzisi bayo. Ukusekelwa okuhlinzekwa ku-Geomedia Pro kwenziwa ngezindlela ezintathu: Ulwazi lwe-Knowledge, Ukusekela kwe-intanethi kanye nefoni. Iziphetho: Kusekelo olunikezwe umsebenzisi weli thuluzi, i-GIS emibili iyafana. Esikhathini sezincwadi ze-Geomedia Pro idlula phambi kwe-gvSIG, ngekhwalithi nokubonisa. Siyazisa kakhulu, ku-Geomedia Pro, ukuthunyelwa kwamadokhumenti uma ufaka ithuluzi, ngaphandle kokuthi umsebenzisi ahambe ngezixhumanisi zewebhu ukuze athole wonke amadokhumenti adingekayo njengase-gvSIG.
Izici zezomnotho Izindleko ze-GIS ngayinye (ilayisensi, ukuqeqeshwa, ukuzenzela, ukugcinwa ...) kuye kwachazwa, okubonisa izindleko zomnotho 'zokufaka ilayisensi phakathi neminyaka emibili yokuqala; futhi, ukuhlola ukuthi inani lihambisana nomkhiqizo. Iziphetho: Izindleko ze-Geomedia Pro ziphakeme kunalokho kwe-gvSIG, noma kunjalo, i-Geomedia Pro ngumkhiqizo ozinzile kakhulu impendulo enhle yokusekela kusuka ku-Intergraph. Impendulo yayizoba: kulezi zi-SIG ezimbili zinezindleko ezibiza.
Izindleko zelayisense I-13.000-14.000 € 0 €
Izindleko zokugcinwa kwelayisense 2.250 € 0 €
Izindleko zokusekela Kufaka izindleko zokugcinwa: ukusekelwa kwefoni, uhlu lomsebenzisi; futhi, uma ivolumu yamalayisensi ibalulekile, ngaphakathi komuntu ubuchwepheshe kumahhovisi amaklayenti. I-0 €, uhlelo lokusekela lusekelwe ohlwini lomsebenzisi futhi isinqumo sokungabaza senziwe ku-24-48h.
Izindleko zokuqeqesha Ama-900 amahora angu-27 ezinsukwini ezingu-5 I-300 € amahora we-20.
Izindleko zokwenza ngokwezifiso 500 € -700 indoda / usuku 240 € - 320 € indoda / usuku.
Etafuleni lemiphumela, sibonisa ukuhlolwa kwesici ngasinye; futhi, ukuhlolwa jikelele kwe-SIG ngayinye; silinganise kusuka ku-1 kuya ku-5 lapho ngakuqala nakuba ngiyihumusha kusukela ku-0% kuya ku-100%: i-20% ivuliwe
I-40% ayanele, i-60% yanele, i-80% iyaphawuleka; futhi, i-100% ihle kakhulu. Kuyathakazelisa ukuthi ngokuvamile, i-gvSIG inesithakazelo esithakazelisayo kakhulu sokuba yindlela ehlelekile, ikakhulukazi njengoba inehlelo lokuthuthukiswa phakathi nesikhathi eside.
Isibalo esilinganisiwe Geomedia Pro gvSIG
Imisebenzi eyisisekelo ye-GIS 100% 80%
Ukuhlaziywa kwendawo 100% 80%
Amandla we-Raster 80% 80%
Ukusebenzisana nemithombo ehlukene yedatha 100% 80%
Ukusebenza 80% 80%
Ukukwazi ukwenza ngokwezifiso, izikripthi noma izilimi ezingaphandle kwe-SIG 100% 60%
Amakhono we-3D 40% 20%
Amamephu 100% 100%
Ukusekelwa kwamaDokhumenti 100% 80%
Izici zezomnotho ukuhlola 100% 100%
Ukuhlolwa kwe-Global SIG 100% 80%
I-ArcView DGN DWG Google Earth I-GvSIG OS wordpress
Thumela Previous«Langaphambilini I-AutoDesk izobonisa okungcono kakhulu kwe-RasterDesign
Post Next Abakhi behlayaOlandelayo "
Izimpendulo ze-2 ku "Ukuqhathanisa phakathi kwe-Geomedia ne-GvSIG"
Sawubona, ibhulogi enhle kakhulu, uma uthanda, hamba kuwebhusayithi yami, ukuthumela amazwana.
database of argentina